Olana be io nefa lazaina foana fa zon’ny ankizy ny mianatra. Tsy afaka hianatra sy hahazo diplaoma anefa ny ankizy raha tsy mahazo an’io ary heveriko, hoy I Nantenaina, fa naman’ny herisetra ny tsy fandraisana andraikitra manoloana izany satria tandindomin-doza ireo ankizy ireo. Raha tsy manana izany mandra-paha lehibe izy dia na ho mpibata entana ka mety higadragadra fahatany noho ny tsy fahitana karapanondro raha tratra alina na ho lasa mpanao ratsy. Mila jerena izany ary antony nanaovako laharam-pahamehana ny fifanarahana tamin’ny tribonaly tao an-toerana mba hahafahana ankizy maherin’ny 4000 isa hahazo kopia. Niisa 3000 moa no efa nisitraka izany ny taona 2018 ary ho amin’ity taona ity kosa dia efa miandry ao ny ho ana ankizy 1200 isa, raha ny nambarany hatrany.